Hospitaalli Abee Dongoroo ijaarsisaa xumuramuun eebbifame – Fana Broadcasting Corporate
Hospitaalli Abee Dongoroo ijaarsisaa xumuramuun eebbifame
Finfinnee, Bitootessa 8, 2011 (FBC)- Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroo Hospitaalli Abee Dongoroo guyyaa har’aa Qarshii miliyoona 56 oliin Ijaarsisaa xumuramuun bakka itti aantuu Preezdaantii fi qindeessituun kilaastara hawaasummaa M ootummaa Naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Hasan fi gaggeessitoonni olaanoo akkasumas hawaasni naannoo argamanitti ifaan eebbifamuun tajaajila kennuu eegaleera.
Aadde Xayibaan wayita hospitaalicha eebbisiisan akka jedhanitti Hospitaalli Abee Dongoroo ummanni bara dheeraa rakkoo gama fayyaan qabu furuuf gaafachaa tureen mootummaan xiyyeeffannaa keennuun hojjechuun eebbaaf qaqqabuusaatiin hawaasa naannichaatiin baga gammaddan jedhaniiru.
Mootummaan fuulasaa gara misoomaatti deeffachuun pirojektoota harkifataniifi komii ummata kaasisaa turan ariitidhaan xumursiisuun tajaajila ummataaf banaa akka ta’an taasisaa jira.
Hospitaalli Abee Dongoroo guyyaa har’aa eebbifamuun tajaajila ummataaf banaa ta’e kunis qaama kanaati.
Hospitaalichi gamoosaa bareechuu qofa otuu hin ta’in meeshaaleen hedduu qaalii ta’an guuttamuusaa Aadde Xayibaan eeruun, ummanni ittiin tajaajilamuu qofa otuu hin ta’in akka qabeenya dhuunfaasaattis kunuunsuu akka qabus dhaamaniiru.
Hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Naannoo Oromiyaa Dooktar Darajjee Dhugumaa gamasaanitiin mootummaan hawaasaani tajaajila fayyaa dhiyeenyaatti akka argatu xiyyeeffannaadhaan hojjechaa jira jedhaniiru.